२ करोड पटक हेरिने पहिलो गीत बन्यो ‘सुर्के थैली’
राजनराज सिवाकोटीको शब्द, संगीत र स्वर रहेको ‘सुर्के थैली खै’ बोलको गीतको भिडियोलाइ युटुबमा २ करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो गीतमा राजनराजका अतिरिक्त अञ्जु पन्त र राजु विश्वकर्माको पनि स्वर छ । चलचित्र ‘वडा नम्बर छ’मा रहेको यो गीतको भिडियोमा दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, केदार घिमिरे, दयाहाङ राई लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । नेपाली गीतलाई...
निर्वाचन आयोगले यही असोज महिनामा प्रदेशसभाको चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै कात्तिकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव गरेर मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर मतगणना भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले विहीबार सिंहदरबार पुगेर आगामी चुनावबारे छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री...
खोटाङको एेंसेलुखर्क गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित कांग्रेसका विश्वनाथ निरौलाले २ हजार १ सय ३१ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम पतिद्वन्द्वी एमालेका गृहबहादुर राईलाई १ हजार ७ सय ३५ मत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित एमालेकी पुष्पकला भुजेलले १...
अरब क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानको विषयमा वार्ता गर्न साउदी अरेबियाले अस्वीकार गरेपछि प्रतिबन्ध खेपिरहेको कतारले त्यसको निन्दा गरेको छ । साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टले कतार समक्ष प्रतिबन्ध हटाउनका लागि १३ बुँदे माग गएको शुक्रबार राखेका थिए । १० दिनको समयसहित गरिएको माग कतारले पूरा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर मागका विषयमा छलफल भने गर्न...
डोल्पाः वर्षायाममा पानीको मुहान दूषित, बिरामी बढ्न थाले
वर्षायाम सुरु भएसँगै मुहानमा पानी बढ्न थालेपछि डोल्पाली दूषित पानी पिउन वाध्य छन्। निरन्तरको वर्षाले खानेपानीको मुहानमा माटो, बालुवा, काठका टुक्राजस्ता फोहर बगाएर ल्याउने गरेकाले खानेपानी दूषित भएको हो। स्वच्छ खानेपानी नहुँदा त्यही दूषित पानी पिउनुपर्ने वाध्यता रहेको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका दुर्गाप्रसाद देवकोटाले बताए। जिल्लाका त्रिपुराकोट, गल्ली, रल्ली, खदाङ...
रमेश न्यौपाने प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एउटा अपेक्षा थियो, आफ्नो धमिलो छविमा उनले सुधार ल्याउलान् । कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व स्वास्थमन्त्री गगन थापाकै शब्दमा भन्दा यो देउवाका लागि अन्तिम अवसर हो । प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा बोल्दा देउवाले असार १४ को चुनाव कुनै हालतमा नसार्ने भन्दै संविधान संशोधनबारे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, संविधान पनि संशोधन भएन...
गोलकिपर क्लाउडिओ ब्राभोले उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै चिलीले पोर्चुगललाई हराएको छ र कन्फेडेरेसन कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ । टाइब्रेकरमा चिलीका गोलरक्षक ब्रभोले पोर्चुथलको तीन पेनाल्टी रोकेका थिए । सायद यसले चिलीलाई न्याय पनि गरेको छ । किनकि अतिरिक्त समयको अन्तिममा चिलीले पेनाल्टी दाबी गरेको थियो तर, रेफ्रीले दिएनन् । निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा...
असार १६ गते नायिका नीशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेष्वाकर बिबाह बन्धनमा बाँधिदैछन् । बिहे बन्धनमा बाँधिन लागेको यो जोडीको प्रेम प्रसंग निकै रोचक छ । आज हामी तपाइलाई यो जोडीको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्दछौ । १. नायिका नीशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेष्वाकरलाई सबैभन्दा पहिला काठमाण्डौको बीग मुभिजमा देखिएको थियो । एकसाथ चलचित्र...
ताप्लेजुङ अपडेटः एमालेले ‘क्लिनस्वीप’ गर्ने संकेत
पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिकासमेत ९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये बहुमत स्थानीय तहमा एमालेको अग्रता देखिएको छ । कुल ९ स्थानीय तहमध्ये फक्ताङलुङ र मिक्वाखोला दुईवटा गाउँपालिकाको मतगणनाको प्रारम्भिक तथ्य हामीलाई प्राप्त भएको छैन । बाँकी ९ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा एमालेको अग्रता छ भने एउटामा कांग्रेस र एमालेको बराबरी देखिएको छ...
कोरियन भाषा परीक्षाको रिजल्ट भोलि नआउने, छुटेकाको पुनः परीक्षा तोकियो
भोलि शुक्रबार कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नहुने भएको छ । सरकारले यसअघि असार १६ गते नतिजा प्रकाशित गर्ने तालिका बनाएको थियो । तर, गत जेठ २७ र २८ गते भएको परीक्षामा सरकारकै लापरवाहीका कारण केही परीक्षार्थीले जाँच दिन नपाएपछि अब साउन ११ गते नतिजा आउने गरी नयाँ तालिका बनाइएको छ । एसियन इन्स्टीच्युट अफ टेक्निोलोजि एण्ड म्यानेजमेन्ट, खुमलटारमा परीक्षा दिनुपर्ने...
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिरामीले समेत सक्रिय सहभागिता देखाएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा बिरामीले स्ट्रेचरमा बोकेर भए पनि मतदान गरेका छन्। झरीको समेत वास्ता नगरी बिरामीलाई स्ट्रेचरमा प्लाष्टिक अढाएर पनि मतदान केन्द्रमा लगिएको दृश्य बाहिर आएका...
डुंगा चढेर मतदान !
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ७ का ३ सय १३ मतदाताले डुंगा चढेर मतदान गरेका छन् । एउटै वडा कनकाई नदी वारि र पारी परेपछि उनीहरुले डुंगा चढेर जोखिमपूर्ण रुपमा मतदान गर्नु परेको हो । गएरातिदेखि विहानसम्म परेको पानीले नदीमा बाढी आउँदा उनीहरु चन्द्रडाँगीस्थित मतदान केन्द्र आउन डुंगा चढेर नदी तर्नु परेको थियो । लालपानीबाट चन्द्रडाँगीको शुक्र माविमा मतदान गरेर...
बर्षकै बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । नायक अनमोल केसीलाई मात्र समावेश गरेर चलचित्रको फस्टलुक तयार पारिएको छ । फस्टलुक सार्वजनिक गरेसँगै चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक भएको छ । यो चलचित्र कात्तिक ३ गतेबाट देशभरका हलमा रिलिज हुने पक्का भएको छ । चलचित्रको फस्टलुकमा नायक अनमोल केसी लामो कपाल पालेर एक्सन अवतारमा देखिएका छन् । अनमोलले यो...
निर्वाचन आयोगले अधिकांश स्थानीय तहको मत परिणाम तीन दिनभित्रै आइसक्ने बताएको छ । साथै धेरै मतदाता भएका स्थानीय तहलाई समेत ७ दिनभित्र परिणाम सार्वजनिक गरिसक्न भनेको छ । तीनवटा प्रदेश १, ५ र ७ नम्बर का ३३४ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि आज मतदान भइरहेको छ । मतदान सकिएपछि स्थानीय तहको केन्द्रमा मतपेटिका ल्याइनेछ र मतदान अधिकृतले राजनीतिक सहमतिमा गणना सुरु गर्न...
भियतनामका सरकारी निकायले फेसबुक खाता खोली अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नपर्नेु कर नतिरेको भन्दै कर तिर्न नमान्ने व्यवसायीको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । भियतनामी कर कार्यालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई कर उठाउन अनलाइन व्यवसायीसँग अपनाउनुपर्ने कडा उपाय अपनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । कर कार्यालयका अनुसार...